Igbo, Romans, Lesson 032 -- The Grace of Christ Overcame Death, Sin, and the Law (Romans 5:12-21) | Waters of Life
Home -- Igbo -- Romans - 032 (The Grace of Christ)
3. Amara nke Kraist meriri ọnwụ, mmehie na Iwu (Ndi Rom 5:12-21)
NDI ROM 5:12-14
12 Ya mere, dị nnọọ ka mmehie sitere n'otu mmadụ bata n'ụwa, ọnwụ esitekwa ná mmehie, ọnwụ wee si otú ahụ gbasaa ruo mmadụ niile, n'ihi na mmadụ niile mehiere — 13 (N'ihi na rue mgbe iwu dị n'ụwa, ma ọnaghị ekwupụta mmehie mgbe enwere ya. Ọ dighi iwu ọ bula. 14 Kama onwu sitere na Adam rue Mosis, buru kwa ndi emehieghi dika oyiyi Adam si di, nke bu onye ahu nke gaje ibia.
Pol mere ka anyị mata ihe omimi nke ọnwụ, na-egosi na mmehie anyị bụ ihe kpatara mbibi anyị. Nne na nna anyị mbụ bidoro inupụrụ Chineke isi, ha wee nweta ikpe ọnwụ, na-adọkpụrụ ihe niile e kere eke na nrụrụ aka ha, n'ihi na anyị bụ otu agbụrụ. Site na mgbe ahụ oge ahụ, ọnwụ na-achị ihe nile ekere eke, ọbụlagodi ndị ọka iwu na nsọpụrụ nke ọgbụgba ndụ ochie, maka mmehie apụtawo ìhè, ikpe amamikpe abụrụla nke iwu kwadoro site na mgbe iwu pụtara.
Anyị niile na-anwụ, n’ihi na anyị bụ ndị mmehie. Humanwa mmadụ anyị enweghị ndụ ebighi ebi. Anyi n’aga n’ihu rue onwu, nihi na anyi bu nkpuru onwu n’ime anyi. Agbanyeghị, Chineke na-enye anyị oge ichegharị ka anyị wee nara Onye nzọpụta, ma mee ka anyị mata ndụ ọhụrụ site n'okwukwe Ndị Kraịst.
NDI ROM 5:15-17
15 Ma onyinye ahụ adịghị ka njehie ahụ. N’ihi na ọbụrụ na ọtụtụ ndị nwụrụ site na njehie nke otu nwoke, lee ka amara Chineke na onyinye nke sitere n’amara nke otu nwoke ahụ, bụ Jizọs Kraịst siri ju ebe niile! 16 Ọzọ, onyinye nke Chineke adighi ka nka sitere na nmehie nke otu onye ahu: ikpé ahu sochiri otu nmehie ma weta amam ikpe, ma onyinye ahu juputara na njehie nile ma weta ezi omume. 17 N’ihi na ọbụrụ na, site na njehie nke otu nwoke ahụ, ọnwụ na-achị site n’aka otu nwoke ahụ, lee ka ndị na-anata oke onyinye amara nke Chineke na onyinye nke ezi omume ga-esi na-achị na ndụ site n’aka otu nwoke ahụ, Jizọs Kraịst.
Pol kowara anyi ihe omimi nke nmehie na onwu site n'aka Adam nke mbu, na ezi omume na ndu site na Adam nke abuo, onye O na - akpo nna anyi mbu: “ihe nlere anya nke Kraist, onye gabia”.
Pol ekwughi na dika nmehie na onwu si gbasaa n’agha site n’aka Adam, otua ka amara nke Chineke na onyinye nke ndu ebighe si gbasaa n’ime mmadụ ahụ Jizọs; n’ihi na Kraịst karịrị Adam, ma dị iche na ya. Onye nwe anyi n’enye anyi, obughi n’obere ihe, kama n’onyinye amara nke elu igwe na onyinye. Amara ya bara ụba nke ukwuu. Ọ bụghị egbu egbu na ahụ mkpọnwụ dịka ọnwụ, kama ọ na-amịpụta ndụ, ma na-amị mkpụrụ, ma na-eto eto ma sie ike.
Ikpe nke Chineke megide mmehie malitere site na nwoke mbụ, wee bufee mmadụ niile amamikpe ozugbo. Ọ bụghị otu ihe na ikpe ziri ezi, nke na-esiteghị na otu onye mmehie, kama ya na ndị mmehie niile, n'ihi na Jizọs gụrụ ha n'onye ezi omume n'otu oge. Onye nke kwere na ya bu onye ezi omume.
Mgbe ọnwụ, n’ihi mmehie nke nne na nna anyị mbụ, ghọrọ eze na-egbu egbu n’elu mmadụ niile, Jizọs mepere, ya na nnukwu amara ya, isi iyi nke ahụ efe na nke dị mma, nke ndụ ebighi ebi na-esite n’aka ndị kwere ekwe niile. Kaosinadị, ndụ nke Chineke achịghị n'ike nke ndị kwere ekwe, dịka ọnwụ nwụrụ, kama ndị ahụ dị ọcha ga-eso Kraịst bụrụ Onye nzọpụta ha na Onyenwe ha ruo mgbe ebighi ebi. N’ezie, enweghị ike iji ịdị ukwuu nke Kraịst tụnyere Adam n’ụzọ niile, n’ihi na amara na ndụ nke Chineke dị iche na ọnwụ na ikpe.
NDI ROM 5:18-21
18 Ya mere, dịka mmehie si n’aka otu mmadụ bịara n’ekpe mmadụ niile ikpe, nke mere ka amamikpe pụta, yabụ, site n’ezi omume nke otu mmadụ ka onyinye ahụ ruru n’arụ mmadụ niile, nke rụpụtara n’ezi omume nke ndụ. 19 N’ihi na dị ka site na nnupụisi nke otu mmadụ ka emere ọtụtụ ndị mmehie, otu a kwa ka a ga-esi guzosie ike site n’otu nrubeisi nke mmadụ, ọtụtụ mmadụ ga-abụ ndị ezi omume. 20 Iwu ahụ wee banye na iwu ahụ nwere ike ịba ụba. Ma ebe nmehie riri nne, amara bara uba nke-uku, 21 ka nke ahu we buru eze dika ọnwu si di, ka amara we buru eze site n'ezi omume rue ndu ebighi-ebi site na Jizos Kraist Onye-nwe-ayi.
Pol afiak ke ekikere esie ke ufọt Adam ye Kraist. N ’uzo akwukwo a, odigh ntulee ndi mbu, kama ha bu ihe ha na omume ha. Site na nmebi iwu ahu mmadu kpere madu nile ikpe, ma site n’otu ezi omume mee ka izi ezi na ezi ndu ebighebi diri mmadu nile. Lee ka onyinye nke elu igwe si dị ukwuu! E, site na nnupụisi nke nwoke mbụ ahụ, e mere ka anyị niile bụrụ ndị mkpọrọ nke mmehie; ma site na nrube isi mbụ ahụ, a tọhapụrụ anyị ma mee anyị ndị ezi omume.
N’ikpeazụ, na ntụnyere ya n’etiti Adam na mmehie ya, na Kraịst na ezi omume ya, Pol banyere nsogbu nke iwu. Etughị iwu ahụ ka ọ nyere aka maka nzọpụta nke ụwa n'ihi na ọ bịara n'akụkọ banyere nzọpụta iji gosipụta mmebi iwu, ma kpasuo mmadụ imezu nrube isi ya. Iwu mere ka obi mmadu sie ike na otutu mmehie ya. Dika odi, Kraist wetara ayi nso ka amara nile si di, o we nye anyi ike zuru oke na ezi okwu nke mmiri n’amara puru ibanye n’uwa nile nke uwa. Pol rejoụrịrị ọ andụ ma tiekwa mkpu ọ ,ụ, “Ọ bụrụ na mmehie, site ọnwụ, na-ejigide mmadụ niile n'oge gara aga, ọchịchị ọjọọ ahụ apụwo ugbu a, n'ihi na amara amarala eze nwanyị dị ka ọgbọ anyị, na-elekwasị ya n'ezi omume nke Chineke nke e gosipụtara nke ọma obe nke Jizos”.
Mmadu obula nwere ihe mere ha n’ekele, nyem obi, ma nye otuto, nihi na onwu na nbilite n’onwu nke Kraist mepere anyi oge ohuru akuko, nke eji merie ike nke mmehie na onwu. Anyi n’etu uto nke amara site na nkpuru ya na ndu ebighebi, ma njuputa nke ike nke Chineke n’eme site n’ozi oma n’ime ndi niile kwere na Kraist.
EKPERE: Anyị na-efe gị Onyenwe anyị Jizọs, n’ihi na ị bụ Onye meriri mmehie, ọnwụ na Setan. I kuru ayi rue oge amara, I mewokwa ka anyi nwee ihe nmekorita nke ndu gi. Mee ka okwukwe anyị sie ike, meekwa ka nghọta anyị dị nkọ wee ghara ịgakwuru ike ndị gara aga nke meriri. Guzoputa anyi n’amara gi, weputa nkpuru nile nke Mmuo gi, dika ihe akaebe na amara Gi n’ezie n’ezie, ma dikwa ike karie onwu. Ekele diri gi n’ihi na I jiri otutu anyi mee ka anyi jiri nkwanye ugwu gozie anyi.
Gịnị ka Pọl chọrọ igosi anyị site na ntụnyere ya n'etiti Adam na Jizọs?